ကျန်းမာရေးအရ ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ မပါဝင်နိုင်ပေမယ့် အိမ်ပြန်ခရီးကိုတော့အခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးဖို့ နေပူထဲမှာရပ်စောင့်နေတဲ့ ဦးကျော်သူ – Cele Oscar
ကျန်းမာရေးအရ ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ မပါဝင်နိုင်ပေမယ့် အိမ်ပြန်ခရီးကိုတော့အခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးဖို့ နေပူထဲမှာရပ်စောင့်နေတဲ့ ဦးကျော်သူ
February 17, 2021 By L YC News
ပီပြင် ပိုင်နိုင် လွန်းတဲ့ သရုပ်ဆောင်ကောင်းမှု တွေနဲ့ အတူ ဆယ်စုနှစ်တွေ ကတည်းက ယနေ့အချိန်ထိ ပြည်သူပရိသတ်တွေ ရဲ့ရင်ထဲ အခိုင်အမာ နေရာယူထားသလို ပရဟိတ အလုပ်တွေလည်း တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ဆောင်နေသူ ကတော့ အကယ်ဒမီဦးကျော်သူ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။ပရဟိတ မင်းသားကြီး အဖြစ် အများပြည်သူချစ်ခင် လေးစားနေ ကြရတဲ့ ဦးကျော်သူ ဟာ လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ပြည်သူတွေ နဲ့အတူ တစ်သားတည်းရပ်တည်နေတာလည်း အားလုံး မြင်တွေ့ရမှာပါနော်..။
မကြာခင် ကမှ ကိုဗစ်ရောဂါ ကုသပျောက်ကင်း ခဲ့တဲ့ ဦးကျော်သူဟာ ကျန်းမာရေးအရ လမ်းလျှောက် လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ကိုယ်တိုင် မပါဝင်နိုင်ပေမယ့်လည်း အများပြည်သူတွေ အိမ်ပြန်ခရီး အဆင်ပြေစေ နိုင်ဖို့အတွက် ကားမောင်းပြီး အခမဲ့ပို့ဆောင်ကာ ပေးခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်..။အားလုံး နဲ့ တစ်သားတည်းရပ်တည်ကာ တတ်နိုင်သလောက် ပါဝင်အားဖြည့်ပြီး ရေသန့် ၊ မုန့် ၊ အချိုရည်ဗူး တွေနဲ့ ရှူဆေးကဒ် တွေ ဝေငှခဲ့တဲ့အပြင် ပြည်သူတွေ အိမ်ပြန်ခရီးကို အခမဲ့ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက် နေပူပူထဲ ရပ်စောင့်ပြီး တစ်တပ် တစ်အားပါဝင် ကူညီခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။
“ကမ်ဘာအေး မြောက် ဥက္ကလာ ဝန်ဆောင်မှု ။ ဆူးလေမှာ နေခြစ်ခြစ် တောက်အပူ၊ ရင်ထဲက အ ပူမီးများဖြင့် ပြန်လာကြသော ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသား၊ ဝန်ထမ်း၊ ပြည်သူလူထုတို့အား ရန်ကုန်မြို့ သမ္မတရုပ်ရှင်ရုံ ရှေ့မှ အပြန်ခရီးအတွက် ကမ်ဘာအေး၊ မြောက်ဥက္ကလာ အထိ အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုတို့အား သောက်ရေသန့် ဗူးများ၊ အားဖြည့် အချိုရေဗူးများ တိုက်ကျွေးကာ ကုသိုလ်ဖြစ်လုပ်ဆောင်ပေးနေပါသည်။..” ဆိုပြီး ဝေမျှပြောပြထားသလို”အုတ်တစ်ချပ်၊သဲတစ်ပွင့်နှလုံးခွဲစိတ်သွေးကြောလေးချောင်းလဲထား၊ ဒီကြားထဲ ကိုဗစ်ကဖြစ်ခဲ့ရတော့အမောသိပ်မခံနိုင်။
လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြမှု မလုပ်နိုင် ၍ ကိုယ်နိုင်ရာ ရေသန့် ၊ မုန့်များ ၊ အ ချိုရည်ဗူးများ ၊ ရှူဆေးကဒ်များ ဝေငှခြင်းအပြင် အများပြည်သူလူထုတို့၏ အိမ်ပြန်ခရီးအဆင်ပြေ ချောမွတ်ရန် အတွက် ဖယ်ရီ ပို့ဆောင်ခြင်း ဒါနကို ပြုခဲ့ပါသည်။အုတ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင့် ပေါ့ ခင်ဗျာ။..” ဆိုပြီးတော့လည်း တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ ပံ့ပိုးကူညီခဲ့တာလေးတွေကိုလည်း ဝေမျှထားပါသေးတယ်နော်..။
သတင်းအရင်းမြစ်: Kyaw Thu’s Fb Acc
ပီပွငျ ပိုငျနိုငျ လှနျးတဲ့ သရုပျဆောငျကောငျးမှု တှနေဲ့ အတူ ဆယျစုနှဈတှေ ကတညျးက ယနအေ့ခြိနျထိ ပွညျသူပရိသတျတှေ ရဲ့ရငျထဲ အခိုငျအမာ နရောယူထားသလို ပရဟိတ အလုပျတှလေညျး တစိုကျမတျမတျ လုပျဆောငျနသေူ ကတော့ အကယျဒမီဦးကြျောသူ ပဲ ဖွဈပါတယျ..။ပရဟိတ မငျးသားကွီး အဖွဈ အမြားပွညျသူခဈြခငျ လေးစားနေ ကွရတဲ့ ဦးကြျောသူ ဟာ လကျရှိ ဖွဈပျေါနတေဲ့ အခွအေနတှေေ နဲ့ ပတျသကျပွီးတော့လညျး ပွညျသူတှေ နဲ့အတူ တဈသားတညျးရပျတညျနတောလညျး အားလုံး မွငျတှရေ့မှာပါနျော..။
မကွာခငျ ကမှ ကိုဗဈရောဂါ ကုသပြောကျကငျး ခဲ့တဲ့ ဦးကြျောသူဟာ ကနျြးမာရေးအရ လမျးလြှောကျ လှုပျရှားမှုတှမှော ကိုယျတိုငျ မပါဝငျနိုငျပမေယျ့လညျး အမြားပွညျသူတှေ အိမျပွနျခရီး အဆငျပွစေေ နိုငျဖို့အတှကျ ကားမောငျးပွီး အခမဲ့ပို့ဆောငျကာ ပေးခဲ့တာ တှရေ့ပါတယျ..။အားလုံး နဲ့ တဈသားတညျးရပျတညျကာ တတျနိုငျသလောကျ ပါဝငျအားဖွညျ့ပွီး ရသေနျ့ ၊ မုနျ့ ၊ အခြိုရညျဗူး တှနေဲ့ ရှူဆေးကဒျ တှေ ဝငှေခဲ့တဲ့အပွငျ ပွညျသူတှေ အိမျပွနျခရီးကို အခမဲ့ ပို့ဆောငျပေးနိုငျဖို့အတှကျ နပေူပူထဲ ရပျစောငျ့ပွီး တဈတပျ တဈအားပါဝငျ ကူညီခဲ့တာ ဖွဈပါတယျနျော..။
“ကမျဘာအေး မွောကျ ဥက်ကလာ ဝနျဆောငျမှု ။ ဆူးလမှော နခွေဈခွဈ တောကျအပူ၊ ရငျထဲက အ ပူမီးမြားဖွငျ့ ပွနျလာကွသော ကြောငျးသူ၊ ကြောငျးသား၊ ဝနျထမျး၊ ပွညျသူလူထုတို့အား ရနျကုနျမွို့ သမ်မတရုပျရှငျရုံ ရှမှေ့ အပွနျခရီးအတှကျ ကမျဘာအေး၊ မွောကျဥက်ကလာ အထိ အခမဲ့ဝနျဆောငျမှုတို့အား သောကျရသေနျ့ ဗူးမြား၊ အားဖွညျ့ အခြိုရဗေူးမြား တိုကျကြှေးကာ ကုသိုလျဖွဈလုပျဆောငျပေးနပေါသညျ။..” ဆိုပွီး ဝမြှေပွောပွထားသလို”အုတျတဈခပျြ၊သဲတဈပှငျ့နှလုံးခှဲစိတျသှေးကွောလေးခြောငျးလဲထား၊ ဒီကွားထဲ ကိုဗဈကဖွဈခဲ့ရတော့အမောသိပျမခံနိုငျ။
လမျးလြှောကျဆန်ဒပွမှု မလုပျနိုငျ ၍ ကိုယျနိုငျရာ ရသေနျ့ ၊ မုနျ့မြား ၊ အ ခြိုရညျဗူးမြား ၊ ရှူဆေးကဒျမြား ဝငှေခွငျးအပွငျ အမြားပွညျသူလူထုတို့၏ အိမျပွနျခရီးအဆငျပွေ ခြောမှတျရနျ အတှကျ ဖယျရီ ပို့ဆောငျခွငျး ဒါနကို ပွုခဲ့ပါသညျ။အုတျတဈခပျြ သဲတဈပှငျ့ ပေါ့ ခငျဗြာ။..” ဆိုပွီးတော့လညျး တဈထောငျ့တဈနရောကနေ ပံ့ပိုးကူညီခဲ့တာလေးတှကေိုလညျး ဝမြှေထားပါသေးတယျနျော..။
သတငျးအရငျးမွဈ: Kyaw Thu’s Fb Acc
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ CDM လှုပ်ရှားမှု့ မော်တော်ယဉ်များကို ဖေဖော်ဝါရီလ(၁၇) ရက်နေ့ကတွေ့ရစဉ်
ပြည်သူတွေကို မထိခိုက်နိုင်အောင် ရှေ့ဆုံးကနေ ဒိုင်းတွေနဲ့ အကာအကွယ်ပေးပြီး မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ပြခဲ့တဲ့ ပိုင်တံခွန်နဲ့တိုင်ရွန်တို့အဖွဲ့
အဆိုတော် ပိုပိုအတွက် ”ကျန်းကျန်းမာမာ နဲ့ အမြန်ဆုံးပြန်ထွက်လာနိုင်ပါစေလို့အမြဲ ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့” သရုပ်ဆောင် ပိုင်တံခွန်…..
သင်ဇာနွယ်ဝင်းရဲ့ Hotpot ဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ဆိုးဝါးတဲ့ဆက်ဆံရေးကြောင့် စိတ်ပျက်ခဲ့ရကြောင်းပြောပြလာတဲ့ J Naw….
အခက်အခဲတွေများစွာကို အတူတူဖြတ်ကျော်ရင်း ဘေးနားမှာ အမြဲရှိနေပေးတဲ့ ချစ်ဇနီးကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလာတဲ့ ခင်လှိုင်….
အကိုတစ်ယောက်လို အရမ်းချစ်ရသော ကိုသားကြီး ရဲ့ အမှတ်တရပုံလေးတွေကို ချပြလာတဲ့ ဇွဲနိုင်ဝင်း…..
မန္တလေးက သင်္ကြန်မှာ သီချင်းဆိုပြီးထွက်နေတဲ့ သတင်းတွေအပေါ်တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ အဆိုတော် နန်းဆုရတီစိုး…….